M2TS / MTS Editor, Edit MTS / M2TS, M2TS / MTS video editor
> Resource > Beddelaan > Sida loo Edit MTS / M2TS Video Files
Sida loo Edit MTS / M2TS Video Files
MTS (ama M2TS) waa qaab video ah, oo caadi ahaan lagu by kaamirada HD sida Sony, Canon, iyo Panasonic iwm Haddii aad isticmaasho fiidiyo ah in ay toogtaan videos qaabab MTS / M2TS, waxaa jira fursad ah in aad rabto in aad iyaga ka bedel. In this article, waxaana la wadaagayaa doonaa qaar ka mid ah tabaha tafatirka qabow si loo baro guys aad xaalkaa iyo shakhsiyeeyo aad clips footage MTS / M2TS, oo ay ku jiraan goynta, biirtay, qoqobada, lana siii, oo ku daray saamaynta kala duwan sida PIP, music, qoraalka iwm
Qaybta 1aad: Sida loo Edit MTS / M2TS File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit MTS / M2TS File
Si aad u qaban, waxaad u baahan tahay oo ah tifaftiraha smart M2TS / MTS. Qalab aan si adag ugu talinaynaa waa Wondershare Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) - guriga video tafatirka qalab si sahlan loo isticmaalo. Akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah:
Xoog MTS / M2TS Video Editor:
Wondershare MTS / M2TS Video Editor
Taageerada ku dhawaad ​​qaab kasta oo video caan ah oo ay ka mid yihiin MTS iyo M2TS;
Si fudud oo dhaqso loo abuuro gaar ah xirfad-raadinta videos gurigaaga ka MTS / M2TS video files;
Codso saamaynta qabow sida usii-wareeg, humaag, jeexan boodi, fool-off, iyo in ka badan oo la click fudud;
Si fudud wadaagno videos meel kasta sida YouTube, Facebook ama gubi in DVD.
Maxaad Dooro Wondershare MTS / M2TS Editor
Tani video editor MTS / M2TS qoreysa interface sahlan in la isticmaalo kaas hawlo adag oo dhan galay hawlaha fudud. Feature jiitaa-n-dhibic ayaa sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku haboon oo si deg deg ah wax ka bedel.
Functions ayeey Xoog
Iyada oo dhammaan qalabka tafatirka video anfacaya, aad si fudud u samayn kartaa filim qurux badan oo ka mid sawiro iyo videos caadi ah in camera aad. Dalagyada, jar, isku shaandheyn, kala ama qabsato dhalaalka, iska sida aad jeceshahay.
Visual Raadka Fantastic
Si fudud aad MTS / M2TS videos hufan oo aqoon leh iyadoo la siinayo 300+ kala guurka, Intro / credit, horyaal khayraadka laga cabsado, PIP iyo saamaynta.
Siyaabo kala duwan ayaa Output
Si fudud badbaadiyo ama la wadaagto aad movie hab-abbuurka: badbaadiyo qaabab kala duwan, gubi in DVD, geliyaan in ay Facebook ama YouTube ama badbaadin PSP, iPod, iPhone ama 3GP telefoonka gacanta.
Sidee si fudud Edit MTS / M2TS Video:
1. midowdo video clips
Haddii aad rabto in aad labo ama dhowr MTS / M2TS videos, iyaga diyaarin on Timeline oo ay si play ah. Oo haddii aad rabto in aad iyaga u habayn, kaliya jiidi oo hoos u video clip ah meeshii aad rabto. Laakiin ogow in aadan jiidi mid video clip in kale, ama aad u kala qaybsan tahay doonaa mid ka mid ah ka dib.
2. Iska yaree video clip ah
Si aad u gooyay ah clip MTS / M2TS, guji si aad u muujiyo, jiidi sare ee Tusiyaha Waqtiga cas booska aad rabto, ka dibna riix "maqas" button.
3. beddesha, dalagga iyo isbedelka video goobaha
Dooro doonayo aad video clip on Timeline ka dibna riix badhanka Edit ah, ama xaq u riix ka dibna dooro ikhtiyaarka Edit. Markaas waxaad isku shaandheyn karaa, video dalagga, iyo in la beddelo saamayn video iyo video xawaaraha. Marka aad xaq u riix video clip iyo dooran "Audio fuji", waxaad ka heli kartaa wadada maqal ah oo video ah. Hadda, waxaad tirtiri kartaa ama wax ka bedel clip ka audio by righting u riix.
4. Codso Jump Goo, Janjeeri-Shift, Muuse, iyo Face-off
Haddii aad rabto in aad dalbato mid ka mid ah afar saamaynta, dhammaan muuqaalada waxaa laga heli karaa by righting guji video clip ee Jadwalka ka dibna dooro "Power Tool".
Dooro feature menu doonayo in interface ka dibna waxaad ka heli kartaa maktabada khayraadka baahisey. Just jiidi template aad jeceshahay maktabadda khayraadka si video clip ku Timeline ah. Hadda, waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u saxaa.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit MTS / M2TS File (Video Tutorial)
Sida loo jar MTS / M2TS Videos
Sida loo soo dejinta MTS in Adobe jilitaankii
Sida loo sameeyo a Taabashada Home Movie
Sida loo dar Audio in Video Files
Sidee ku cadaadisaa Video
Sida loo Dallaga Video Files
Samee Picture ah ee Picture Saamaynta Si fudud
Top 5 Free MTS / M2TS Video converters
Top 10 Best Free Video ayeey Software for Windows
Top 10 Best Free Video ayeey Software u Mac